गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरले सञ्चालनमा ल्याउदै सुविधा सम्पन्न गोरखा होटल ! - itaharinews
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष १४, २०७६ समय: ११:१८:३६
इटहरी÷पूर्वकै व्यवसायिक घराना गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक वलराम आचार्यले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न गोरखा होटल प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरसँगै डेरी उद्योग अर्गानिक कृषि उत्पादन, बेकरी,दुग्धजन्य उत्पादन, पानी समेत उत्पादन गर्दै आएको आचार्यले पुर्वकै सुविधायुत्त होटल व्यवसायमा समेत लगानी शुरु गरेको हो । यहि पुस १६ गते नै सञ्चालनमा आउने गोरखा होटल ९ तालाको रहेको छ । स्टार होटलको झै सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त हुने गोरखा होटल सञ्चालक बलराम आचार्यले आज एक पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरि जानकारी दिनु भएको छ ।
गोर्खा होटलमा जम्मा ४२ कोठा रहनेछन् । त्यसमा रेष्टुरेन्ट, वारसमेत रहने छ भने ५० जनाको मिटिङ्ग हल रहने छ ।होटलका कोठाहरुमा स्विट्स रुम, डिलक्स, एक्ज्युकेटिभ समेत रहने छन् ।
पूर्वाञ्चलमा यतिबेला अन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले प्रसस्तै होटल सञ्चालनमा ल्याए तापनि प्रयाप्त मात्रमा छैनन् । त्यसबाट ग्राहकहरुले पाउने न्युनत्तम सुविधाहरु समेत अपुग रहेका छन् ।
पुर्वकै नमुना होटलको रुपमा रहेको गोर्खा होटल पुस १६ गते देखी साताव्यापी रुपमा उदघाट्नको अयोजना गर्ने वताइएको छ । पुर्वी नेपालका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु ,राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विशिष्ठ व्यत्ति,उधोगी व्यापारी तथा अन्य पेशाकर्मीहरुलाइ चरणवद्ध रुपमा आमन्त्रण गरी सप्ताहव्यापी होटल उदघाटनको अयोजना गरिने सञ्चालक आचार्यले जानकारी दिनु भएको छ । त्यस अवधिमा होटल तथा रेष्टुरा तथा लिकर्समा विषेश छुट समेत दिने आचार्यले बताउनु भयो ।